ကြယ်အစုအဝေး၏ အလယ်တွင်တည်ရှိသည့် တွင်းနက်ကြီး၏ ပထမဆုံးပုံရိပ်ကို နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် များထုတ်ဖော်ပြသ - Xinhua News Agency
ကြယ်အစုအဝေး၏ အလယ်တွင်တည်ရှိသည့် တွင်းနက်ကြီး၏ ပထမဆုံးပုံရိပ်ကို နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် များထုတ်ဖော်ပြသ
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အောင်မြင်မှုများအပေါ် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အမြင်များ
တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်တုန်းတွင် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှု ရုပ်သံဖိုင်
ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေအိမ်သို့ ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ဧရာမ ဖွတ်ကြီး
၁၉၉၇ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းသည် ဟောင်ကောင်ဒေသ၏ ရွှေရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်တစ်ဦးဆို
ရှန်ဟိုင်း၊ မေ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များက နဂါးငွေ့တန်းကြယ်အစုအဝေးအလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည့် အလွန်ထုထည်ကြီးမားသော တွင်းနက်ကြီး၏ ပထမဆုံးပုံရိပ်ကို မေ ၁၂ ရက်တွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပုံရိပ်ကို Event Horizon Telescope (EHT) ဟု ခေါ်ဆိုသည့် ကမ္ဘာ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ရေဒီယို တယ်လီစကုတ်ကွန်ရက်မှ စူးစမ်းလေ့လာမှုများကိုအသုံးပြုကာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းမှာ နဂါးငွေ့တန်းကြယ်အစုအဝေးအလယ်ဗဟိုတွင် Sagittarius A* ဟု သိရှိကြသည့် တွင်းနက်ကြီးတည်ရှိသည်ကို အတည်ပြုနိုင်သော ပထမဆုံး တိုက်ရိုက်မြင်ကွင်းအထောက်အထားဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း NSF က ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
တွင်းနက်ကြီးမှာ ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ်ပေါင်း ၂၇,၀၀၀ ခန့်အကွာတွင်ရှိပြီး နေထက်အဆပေါင်း ၄ သန်းခန့် ပိုမိုထုထည်ကြီးမားကြောင်း နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များကဆိုသည်။
တွင်းနက်ကြီး၏ ပထမဆုံးပုံရိပ် ထုတ်ဖော်မှုတွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၈၀ မှ သုတေသီပေါင်း ၃၀၀ ကျော်က ပူးပေါင်းကာ EHT ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပုံရိပ်ကိုရရှိရန် အတူတကွ အားထုတ်ဖန်တီးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း NSF က ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တွင်းနက်ကြီးကို ဒီအတိုင်းမတွေ့နိုင်ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီတွင်းနက်ကြီးဟာ လုံးဝ ကို မှောင်မည်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်၊ တွင်းအဝပတ်လည်မှာ တောက်ပတဲ့ဓါတ်ငွေ့တွေ ဝန်းရံနေပြီး မှောင်မည်းတဲ့ တွင်းဗဟိုတစ်ခု ဖြစ်လာတာပါ အဲဒါကို အရိပ်လို့ ခေါ်ပြီး တွင်းဝပတ်လည်မှာတော့ တောက်ပတဲ့ အဝန်းအဝိုင်းသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့” ဟု NSF က ဆိုသည်။
တွင်းနက်ကြီး၏ အင်အားကြီးမားသည့်ဆွဲငင်အားကြောင့် အလင်းတန်းများ ကွေးကောက်ရာမှ ပုံရိပ်အသစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
EHT စီမံကိန်းသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သူ Geoffrey Bower က “မိမိတို့အနေနဲ့ အဲဒီတွင်းရဲ့ အရွယ်အစားဟာ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ အထွေထွေနှိုင်းရသီအိုရီရဲ့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနဲ့ ကိုက်ညီခဲ့တာကိုတွေ့ရလို့ အတော်အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်” ဟုဆိုသည်၊။
“ဒီမမျှော်လင့်နိုင်တဲ့ စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြယ်အစုအဝေးအလယ်ဗဟိုမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ အဲဒီ ကြီးမားတဲ့ တွင်းနက်ကြီးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတို့ ဘယ်လိုချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာတွေ နားလည်နိုင်ဖို့ ကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်” ဟု Bower က ဆိုသည်။
EHT ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော M87* ဟုခေါ်သည့် Messier 87 ကြယ်အစုအဝေးနှင့် ပိုမိုဝေးကွာလှသည့်နေရာတွင်ရှိ သော တွင်းနက်ကြီးတစ်ခု၏ ပထမပုံရိပ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် ယခုပုံရိပ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
“အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ တွင်းနက်ကြီးနှစ်ခုအကြား ကွာခြားချက်တွေကနေ အဲဒီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ဘယ်လောက်တောင် အရေးပါသလဲဆိုတဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ သဲလွန်စတွေကို လေ့လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်” ဟု EHT မှ သိပ္ပံပညာရှင် Keiichi Asadaက ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တွင်းနက်ကြီး ၂ ခုရဲ့ ပုံရိပ်တွေရှိပါတယ် ၊ စကြာဝဠာထဲမှာ တစ်ခုကတော့ကြီးမားတဲ့ အနားသတ်ရှိပြီး တစ်ခုကတော့ သေးငယ်တဲ့အနားသတ်ရှိတဲ့ ထုထည်ကြီးမားတဲ့တွင်းနက်ကြီးတွေပေါ့၊ ဒီကနေမှ ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလို တစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ အင်အားကြီးမားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေဟာ မြေဆွဲအားအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာကို ထပ်မံစစ်ဆေးမှုတွေအများကြီးလုပ်ဆောင်မှာပါ” ဟု Asada က ဆိုသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ထုထည်ကြီးမားသည့် တွင်းနက်ကြီးများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ဓါတ်ငွေ့များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာပုံစံနှင့် သီအိုရီများကိုစမ်းသပ်ရန် အချက်အလက်အသစ်များကို စတင်အသုံးပြုလျက်ရှိပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ရှိအချိန်အထိ အပြည့်အဝ နားလည်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ၎င်းမှာ ကြယ်အစုအဝေးများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များအားပုံဖော်ရာတွင် အဓိကကျသည့် အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်စဉ်းစားနိုင်ခဲ့ကြောင်း NSF က ဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Astronomers unveil first image of black hole at center of galaxy
SHANGHAI, May 13 (Xinhua) — Astronomers revealed the first image of the supermassive black hole at the center of the Milky Way galaxy on Thursday.
The image was produced byaglobal research team called the Event Horizon Telescope (EHT), using observations fromaworldwide network of radio telescopes.
It is the first direct visual evidence confirming the presence of the black hole, known as Sagittarius A*, at the center of the Milky Way, said the U.S. National Science Foundation (NSF) inarelease.
The black hole is about 27,000 light-years away from Earth, and4million times more massive than the Sun, according to the astronomers.
The effort to unveil the first picture of the black hole was made through the ingenuity of more than 300 researchers from 80 institutes around the world that together make up the EHT Collaboration, said the NSF.
“Although we cannot see the black hole itself, because it is completely dark, glowing gas around it revealsatelltale signature:adark central region, calleda‘shadow’, surrounded byabright ring-like structure,” said the NSF.
The new view captures light bent by the powerful gravity of the black hole.
“We were stunned by how well the size of the ring agreed with predictions from Einstein’s Theory of General Relativity,” said EHT Project Scientist Geoffrey Bower.
“These unprecedented observations have greatly improved our understanding of what happens at the very center of our galaxy and offer new insights on how these giant black holes interact with their surroundings,” Bower said.
“Now we can study the differences between these two supermassive black holes to gain valuable new clues about how this important process works,” said EHT scientist Keiichi Asada.
“We have images for two black holes – one at the large end and one at the small end of supermassive black holes in the Universe – so we can goalot further in testing how gravity behaves in these extreme environments than ever before,” Asada said.
Scientists have begun to use the new data to test theories and models of how gas behaves around supermassive black holes. This process is not yet fully understood but is thought to playakey role in shaping the formation and evolution of galaxies, according to the NSF.